War murtiyeed laga soo saaray shirkii Golaha iskaashiga Maamulada Somalia | Kalshaale
War murtiyeed laga soo saaray shirkii Golaha iskaashiga Maamulada Somalia
May 16, 2018 - 2 Aragtiyood
Baydhabo (Kalshaale) Shirkii Madaxda maamul goboleedyada uga socday magaalada Baydhabo ayaa la soo gabagabeeyay, kaasoo laga soo saaray war.murtiyeed ka kooban dhowr qodob.
Mr Cabdi Wali Gaas oo intuu ku sii jeeday baabiinta dawlada Somaliya isagii shaqo laga dhigtay.Wuu mahadsan yahay Muuse Biixi.
Muusoow,waad mahadsan tahay.
Gaasow waxaa la heblaayo intay gude naag kale dhaqayso ayaa keedi qurmaa. Intuu dowlada Soomaaliya dhibkeeda ku mashquulsanaa ayaa Muuse Biixi dhulkiisii ka shaqaystay, fule xaarwayn, afka noole, shisheeye kalkaal